I-Vitamin "E" ngesiLatini isho "ukufaka isandla ekuzalweni" (tocopherol). Ukuntuleka kwalesi sici esibaluleke kakhulu kungabangela ukungabi nabantwana. Futhi isikhathi esithile ngaphambi kokuba kutholakale lesi sifo, owesifazane ulahlekelwa ubuhle bakhe bonke. Isikhalazo sangaphandle kanye nekhono lokuzala lixhunyaniswa ngokungahambisani. Umsebenzi wama-ovari uyakhuthazwa yi-vitamin E, okufaka isandla ekwenzeni ama-hormone ubuhle (i-estrogens), okuqinisa nokugcoba izikhumba zomzimba wethu. Kumele ngithi isenzo esizimele se-tocopherol sibangela umphumela ofanayo wezithokozi.
I-tocopherol iyinhlobo le-wand magic eliphendula i-Cinderella ephazamisekile esikhumbeni esidala kusuka ku-ultraviolet ibe yinkosikazi enhle.
Ukusetshenziswa kwevithamini E ku-cosmetologists.
Le vithamini ibangela umphumela we-antioxidant, ivikela amangqamuzana e-epidermal kanye ne-elastin ne-collagen ekubhujisweni, okuyinto yama-radicals mahhala angaletha. Ngenxa yalokho, isikhumba senziwa futhi senziwe ngoshukela se-vitamin E, esiza ukunciphisa ukubonakaliswa kokuphendula okweqile kanye nokubonakala kwe-acne.
Kusiza ukuthuthukisa umbala wobuso, ukususa ubuthi, ukuhlanza umzimba nokukhulisa impilo yamangqamuzana egazi abomvu, amangqamuzana egazi abomvu, okwenza njengesivikelo ngokumelene ne-anemia (i-anemia).
Ivuselela izinqubo zokuvuselela esikhumbeni, ngcono ukunikezwa kwegazi layo nokuyithuthukisa.
Inendawo yokuphulukiswa ngokushesha kwamanxeba, ukuphucula isikhumba, ukusiza isimo sesikhumba sokushisa kusukela elangeni kanye neminye imiphumela esebenzayo.
Iyakwazi ukuvimbela ukubhujiswa kwamavithamini C and A. "okubuthakathaka". Kuthuthukisa imiphumela yokulwa nokuguga kanye ne-antioxidant.
Ivikela isikhumba ekufakeni izithombe ezibangelwa ukukhanya kwe-ultraviolet, ukunciphisa ingozi ye-melanoma nezinye izinhlobo zezilonda zesikhumba somdlavuza. Inomphumela omuhle wokuzivocavoca, ngenxa yokuthi uyakwazi ukukhipha izikhwama ngaphansi kwamajwabu amehlo, ubuso obuvuvukile kanye nezinye izimpawu zokuphefumula ngokweqile kwezicubu ezikhula eminyakeni edlule.
Iyakwazi ukuvimbela ukubonakala kwamabala ama-freckles nama-pigment esikhumbeni. Uma ngabe sezivele zivele, i-vithamini ingabakhanyisa ngisho nombala wesikhumba ebusweni.
Umkhuba wansuku zonke wevithamini E.
Ngosuku, umzimba udinga cishe i-100 mg yalesi vithamini sobuhle.
Izinhlobo zikaVithamini E.
Le vithamini, njengoba ikusho, inobuso obuningi, ngoba ayiyona into eyodwa, kodwa 8. Umphumela onamandla kunawo wonke we-vitamin property iyinhlanganisela "ye-alpha-tocopherol". Futhi umphumela onamandla kakhulu wokuvimbela i-anti-oxidant effect yi-tocopherols yesigma ne-gamma. Kuzo zidinga kakhulu isikhumba sethu. Inkinga eyinhloko ukuthi lezi zinhlobo ze-tocopherol ezitholakala emzimbeni azikwazi ukuhlanganiswa futhi azikwazi ukugcinwa endaweni yokugcina, okunye amanye amavithamini amanothi anamafutha aphuma emathunjini phambi kwamafutha asemafinini yemifino ayakwazi.
Amavithamini D, isibonelo, angakwazi ukuqoqa esibindi, futhi A - esikhumbeni, kuyilapho izigqoko nezintende ziqoshwe kumbala ocher. Kodwa i-tocopherol iziphatha ngendlela efanayo namavithamini ayenamanzi ashubile, njengevithamini C. Ahlala emzimbeni isikhathi esithile. Ngakho-ke, amavithamini anjalo adinga ukondla nsuku zonke isikhumba ngaphakathi nangaphandle.
I-vitamin E yemvelo iqukethe amaqabunga e-rose namafutha olwandle. Kodwa uma lezi zinhlobo zamafutha zisetshenziswa esikhumbeni, zizosebenza kuphela phezulu. Ngaphakathi, angeke angena ngaphakathi ngenxa yenkinga ye-phospholipid.
Isikhumba, ukuqothula ama-compounds angaphandle, asiqondi futhi sisebenzise, ​​njenge-vitamin E, equkethe izimonyo zemvelo namafutha. Uma ihlala phezu kwendawo, i-oxidizes ngokushesha futhi ilahlekelwe izakhiwo zayo eziwusizo. Ososayensi isikhathi eside bahlukumezeka ukuxazulula inkinga yokulondoloza ama-tocopherol amakhemikhali kusuka kokushukela kanye nokuhamba kwawo ngaphakathi kwesikhumba. Le nkinga inqunywe kuphela eminyakeni yama-60. , lapho "kusungulwa i-nanocapsules", leli gama labonakala ngisho nangemva kwesikhathi - ema-90s.
I-Nanomasla, ama-liposomal creams ane-tocopherol ama-vitamin E: ukusetshenziswa.
Ama-Nanocapsules ane-tocopherol compounds akwazi ukungena emigqeni yesikhumba, lapho kuguquka ushintsho oluhlobene nobudala okungatholakali okwejwayelekile okwenziwe khona. Ngaphambilini, i-vitamin E yayijojelwe kulezi zigaba ze-dermis nge-intradermal chipping (i-mesotherapy method). Ukusetshenziswa kwama-capsules ku-cosmetology avunyelwe ukwenza ngaphandle komjovo.
Lapho ama-microspheres e-lecithin edlula izithiyo, abambelela ngokuqinile konke okuqukethwe okuqukethwe kuwo futhi awuthumele emgodini ongenakulimaza. Ama-Nanocapsules avumela ukunyuka okuphindwe kathathu kokuqukethwe kwe-tocopherol kuhlanganiswe ku-epidermis. Ukusetshenziswa kwevithamini E kule fomu kusebenza izikhathi ezingaphezu kuka-10 kunesicelo sakho mahhala. Ngesikhathi esifanayo, okuqukethwe kwe-vitamin ku-nanocosmetics kunamaphesenti amahlanu kunaphansi kokujwayelekile.
I-Creams ne-vitamin E: kanjani ukuthenga?
Ingabe amafutha noma ukhilimu aqukethe i-tocopherol acetate? - Uzothola kuphela umphumela wangempela.
Futhi uma ukubunjwa kuqukethe ukubhekisela ku-alpha-tocopherol efakwe ngaphakathi kwe-nanocapsules noma i-liposomes, khona-ke ikhambi elinjalo lingathathwa ngaphandle kokungabaza. Kodwa okokuqala udinga ukubuza mayelana nokutholakala kwesitifiketi sokuphepha. Ifomu le-liposomal ye-tocopherol, ukungena emzimbeni, lithinteka ngokuphelele yilo, njengento yonke engena ngaphakathi ngama-nanoparticles. Ngakho-ke, lezo zimali kufanele zibe yizinga lokuqala kwikhwalithi.
Inzuzo eyengeziwe kuma-cosmetics ayoba khona kuwo amavithamini C kanye nama-vitamin A. Kanye nawo, umphumela we-vitamin E uthuthukisiwe. Inhlanganisela evumelanisa kakhulu i-vitamin E enevithamini C. Inhlanganisela yabo inomthelela oqinile wokuvikelwa emisebeni ye-ultraviolet.
Ukusetshenziswa kahle kwama-creams nge-vitamin E.
Ngaphambi kokusebenzisa izinhlobo ze-nanomasloe noma i-cream liposomal nama-tocopherols, udinga ukugeza izandla zakho. Ukhilimu we-stestility uphukile, uma ngokuzumayo ukhiphe ukhilimu owuningi kunalokho okudingayo, futhi uzame ukubuyisela emuva okungekho emgqeni.
Ngemuva kokuthi usuqedile ukusebenzisa umkhiqizo, kubalulekile ukuvala isembozo ngokuqinile futhi ususe imbiza endaweni emnyama, epholile, kodwa hhayi efrijini. Ukushisa okungcono kokugcina kungaba ngu-20 degrees Celsius. Uma umkhiqizo ungene emehlweni - hlambulula. Kwakukhona ubomvu, ukucasuka - xhumana nodokotela we-dermatologist. Uma usebenzisa ukhilimu, ungalulazi noma ugaye isikhumba. Shayela ukhilimu ngesandla sakho, uhola kalula izindlela zokuzithokozisa ngokusebenzisa imigqa yokuhlunga: kusukela phakathi kobuso - ukuya emngceleni wokukhula kwezinwele kanye namathempeli, izindlebe, ezivela kuma-clavicles, ukushaywa kwezinhlangothi, ukuhogela ukhilimu ukuya emaceleni. Kusukela kubhuloho ekhaleni siphila "ukhilimu" ukhilimu ngokunyakaza okukhanyayo kuze kube sempumpeni yakho.
Amazinyo amhlophe aphuca
Amabhodlela amadaka namaparele
Imikhiqizo egcina isikhumba esisha
Ubuhle obungokomoya nangokwenyama yentombazane
Izimpawu nokwelashwa kwe-nepsatal sepsis
Izinketho zokudla nge-Romantic
Ukunakekelwa kahle kwe-fuchsia
Ikhekhe ngembewu ye-poppy
Kungani ungafuni ucansi emva kokubeletha?